Miaraka aminay ianao dia hahita ny teny faran'izay tsara indrindra, teny sy fahendrena momba ny fiainana ary koa fahendrena fiainana tsara, voalahatra araka ny abidia ary aseho mazava ho anao. Ny teny nindramina hitantsika momba ny fiainana dia mety ihany koa ho toy ny lahatsoratra miarahaba amin'ny karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana ary koa ho an'ny mailaka fiarahabana na hafatra Whatsapp.
Teny nalaina momba ny fiainana - fahendrena eo amin'ny fiainana
Mikaroha amin'ny alàlan'ny topy maso ny teny miisa tsara momba ny fiainana. Vakio ny fahendrena tsara tarehy avy amin'ny mpanoratra samihafa tamin'ny vanim-potoana samihafa.
Teny nalaina momba ny fiainana sy ny fahendrena - © Alliance / Adobe Stock
Fa ny fiainako, isaky ny fotoana eto amin'ity fiainana ity, na inona na inona hitranga amiko amin'ny ho avy, dia tsy hisy dikany intsony ary ho zava-poana toa ny taloha ihany; nahazo heviny tsy azo afindra izy io: miankina amin'ny tsara azoko apetraka amin'ny fotoana rehetra amin'ny fiainako izany. Leo Tolstoy
Ny olona matanjaka rehetra dia tia fiainana. Heinrich Heine
Ny zava-drehetra an'ny olombelona dia tsy maharitra mandrakizay, fa hatrany ambany hatrany hatrany am-piandohana mandra-pahatongany any amin'ny farany, indrindra ny ain'olombelona. Miguel de Cervantes Saavedra
Ny zava-drehetra amin'ny fiainana dia misy vidiny; na dia ireo zavatra eritreretinao ho nomena aza. Theodor Fontane
Ny fiainana rehetra dia tolona ataon'ny tsirairay amin'izao rehetra izao. Christian Friedrich Hebbel
Tsy misy zava-dehibe amin'ny fiainako sy ny anjarako. Tena zava-dehibe ny vokatry ny fiainako. Johann Gottlieb Fichte
Mihetsika toy ny fety amin'ny fiainana. Entina manodidina ary tonga any aminao ny sakafo: manatratra ny tenanao ianao ary mandray azy am-pahamendrehana. Entina any izy: tsy hazoninao. Mbola tsy tonga taminao izany: fehezinao ny fanirianao ary miandry mangina mandra-pahatongany aminao. Ataovy amin'ny zanakao, vadinao, toerana malaza sy harena izany, ary ianao dia ho mpiara-mamaky latabatra amin'ireo andriamanitra. Epictetus
Ny tsiambaratelo rehetra hanitarana ny fiainanao dia tsy ny hanafohezana izany. Ernst Freiherr von Feuchtersleben
Izany no fahamarinana lehibe amin'ny famoronana izay foronina ho an'ny tenany ny toe-piainany. Gustav Theodor Fechner
Ny fiainana dia mihetsika. Aristote
Ny fiainan'ny tsirairay dia angano nosoratan'ny tanan'Andriamanitra. Hans Christian Andersen
Tsy tian'ny fiainana izany ary tsy tsara fanahy na mankasitraka olona iray raha raisiny ho zava-dehibe loatra izany. Frank Wedekind
Ny fiainana dia tsy misy lanjany mihoatra ny omentsika azy. Ludwig Anzengruber
Ny fiainana no iandrasan'ny fanjakana tsy azo ihodivirana indrindra. Antoine de Saint-Exupery
Ny fiainana no tadiavina tsy misy zavatra. Christian Morgenstern
Tendrombohitra ny fiainana; raha mbola miakatra ianao dia afaka mahita ny tampon'isa ka mahatsapa fifaliana. Fa raha eo an-tampon'ny ianao dia hitanao tampoka ny lavaka mangitsokitsoka sy ny farany, dia ny fahafatesana. Miadana miakatra izy io, nefa midina haingana. Guy de Maupassant
Tetezana misento ny fiainana noho ny ranomaso be. Philip James Bailey
Ny fiainana dia hatsikana ho an'ny mpandinika ary zava-doza ho an'ireo izay mahatsapa. Hippocrates
Ny fiainana dia aretina ary ny tsy mampitovy ny olona fotsiny dia eo amin'ny dingana samihafa amin'ity aretina ity izy ireo. George Bernard Shaw
Ny fiainana dia zava-kanto iray izay hijanonan'ny olona foana matetika. Mba hahatratrarana ny fifehezana dia mila mandatsaka ny fonao sy ny fanahinao ianao. Carmen Sylva
Zava-doza ny fiainana izay ipetrahantsika mpijery mandritra ny fotoana fohy ary avy eo mandray ny anjarantsika. Jonathan Swift
Ny fiainana dia fitsangatsanganana an-tsitrapo, fanandramana. Dia fanahy iray amin'ny alàlan'ny raharaha, ary satria ny fanahy no mpandeha, dia mandeha amin'ny fanahy ny olona. Amin'izany fomba izany ny fanahy sasany dia niaina tamim-pahavitrihana bebe kokoa, tamin'ny fomba be sy tafahoatra tamin'ny fieritreretana noho ny hafa tany amin'ny tontolo ivelany. Fernando Pessoa
Fohy ny fiainana, kely noho ny fotoana fohy ilainy, fa noho io fotoana fohy io dia saika tsy manam-potoana hankafizantsika azy isika. Jean-Jacques Rousseau
Ny fiainana dia torimaso izay fitiavana no nofinofisiny. Ho niaina ianao rehefa tia. Alfred de Musset
Ny fiainana dia tsy fahafinaretana na fanaintainana, fa raharaha lehibe izay iampangana antsika ary tsy maintsy tarihintsika sy hotanterahintsika ho voninahitsika. Charles Alexis Henri Clérel de Tocqueville
Ny fiainana dia toy ny fitrandrahana nify mahay. Mieritreritra foana ianao fa ny tena zavatra tokony ho voalohany mandra-pahitanao tampoka fa vita daholo. Otto Prince von Bismarck
Ny fiainana no hataoko amin'izany. Romain Rolland
Ny votoatin'ny fiainana dia miankina amin'ny hetsika ampielezany azy. Henri Bergson
Omano ny tenanao fa afaka miaina ela sy fohy ianao. Epicharm
Ny fiainan'ny ankamaroan'ny olona dia miendrika endrika tsy nofinofisiny akory. Richard Rothe
Ela velona izy, izay velona tsara. Thomas Woodrow Wilson
Ny tapany voalohany amin'ny fiananay dia simban'ny ray aman-dreninay ary ny tapany faharoa amin'ny zanakay. Clarence Darrow
Ny tantaran'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia mazàna mizara telo lehibe: ny hadalany, ny fifaliany ary ny fahasambarany na ny manjo azy. Christoph Kuffner
Tokony ho tsapan'ny filozofa fa tsy resaka fiainana io fa tsara sy mahasambatra, na lazaina tsara kokoa, tsy dia ratsy sy tsy faly. Giacomo Leopardi
Tsy azonao atao ny manalava, manitatra, mampitombo ny fiainanao fotsiny. Gorch Fock
Tsy misy afa-tsy hetsika telo ho an'ny olombelona: teraka, velona ary maty. Nefa tsy hitany rehefa teraka izy. Mijaly izy rehefa maty. Ary adinony ny miaina. Jean de La Bruyère
Tsy misy zavatra tsotra kokoa, nefa koa tsy misy zavatra milamina kokoa, noho ny fiainantsika. Caroline Philippine Baroness de la Motte-Fouqué
Misy zavatra tsara, be voninahitra, mendri-kaja amin'ny fiainana! ETA Hoffmann
Anjarantsika no mamolavola ny fiainantsika. Charles-Ferdinand Ramuz
Tonga ny ora iray ho an'ny tsirairay, rehefa manontany tena amin'ny fahagagana izy: manao ahoana ny fiainanao! Ary mbola velona ihany ianao! Friedrich Wilhelm Nietzsche
Aza manontany hoe inona no omen'ny fiainana anao, manontania izay omenao. Alfred Adler
Ankafizo ny maha-olona anao mihoatra ny fomba anananao, ary ny zavatra malalanao indrindra amin'ny fahatsiarovan-tena dia ity fahatsiarovan-tena ity! Jean Paul
Ny fanantenana sy ny tahotra no hery velona mitazona ny fontsika hihetsika ary isaky ny fotoana filan'ny nofo dia tokony hitoky amin'ity fanovana ity isika. Ludwig Tieck
Tsy fantatro izay mety ho fiainana mandrakizay. Fa ity iray ity, ity, dia sangisangy ratsy. Voltaire
Amin'izao fiainana izao dia an'ny adala, ny maditra sy ny be asa ihany izao tontolo izao. Ny zo hiaina sy handresy dia azo raisina ankehitriny amin'ny alàlan'ny fomba fiasa izay ampiasaina hanatrarana fialokalofana ara-tsaina: tsy fahaizana misaina, fahalotoam-pitondrantena ary fientanentanana tafahoatra. Fernando Pessoa
Tsy toy ny angano ny fiainana. Tsy ny faritra rehetra no manana ny fehiny famaranana rima. Théophile Gautier
Raha tsy sambatra ny fiainana dia sarotra ny miaritra; raha faly dia mampatahotra ny manary azy. Samy mivoaka mitovy. Jean de La Bruyère
Ny fiainana no tombony lehibe indrindra amin'ny fiainana! Friedrich Schiller
Tsy omena fiainana ve isika mba hahatonga antsika hanana mpanankarena ara-panahy, na dia tsy maintsy hijaly aza ny endrika ivelany? Vincent van Gogh
Tsy misy fiainana sarotra loatra ka tsy afaka nanamora ny fomba nanaovanao azy. Ellen Glasgow
Tsy misy fiainana tsara tarehy hita raha manaparitaka izany amin'ny andro sy ora maro ianao. Wilhelm Muller
Andeha àry isika hanaiky an-taonany tsara ho fanomezana, satria tsy maintsy mijery ny fiainantsika manontolo mihitsy isika, ary manaiky am-pisaorana isan-taona izay nampiana. Johann Wolfgang von Goethe
Miaina toa anao rehefa maty / maniry ny ho velona. Christian Fürchtegott Gellert
Miaina ny fiainana amin'ny ho avy. Pierre Leroux
Ny fiainana dia zava-kanton'ny famoahana ny fehin-kevitra marina amin'ny eritreritra diso. Samuel Butler
Ny fiainana no manao sy mijaly. Arakaraka ny ahalalan'ny olona iray azy no mampitombo ny fahoriany. Oswald Spengler
Ny kanton'ny fiainana dia misy amin'ny fampifanarahana ny toetranao manokana amin'ny asanao manokana. Luis Ponce de Léon
Tsy afaka mivezivezy any an-dranomasina ny olona raha tsy fantany izay halehany, ary tsy afaka miaina koa ny olona raha tsy fantany izay hatao. Leo Tolstoy
Tokony hisitrika ny fiainana amin'ny fahafenoany sy ny hatsarany ny olona iray nefa tsy mifantoka amin'ny antsipiriany. Ratsy foana ny antsipiriany. Oscar Wilde
Tsy tokony hatahotra fahafatesana ny olona iray, fa izy kosa tsy hanomboka ho velona velively. Marcus Aurelius
Aza atao vonona hiaina feno zato taona. Satria manakaiky ahoana ny hiafaranao! Fa raha mbola velona koa ianao, raha mbola eo am-pelatananao izany dia manaova soa! Marc Aurel
Ny fiainako dia mitovy amin'ny dian'ny mpitsangatsangana mamaky ny lanezy: manamarika ny làlana izy io, nefa tsy mandoto azy. Karl Ludwig von Knebel
Noho ny volo fotsy sy ny ketrona dia tsy tokony hieritreritra olona ela velona ianao. Tsy ela velona izy, teo fotsiny nandritra ny fotoana ela. Lucius Annaeus Seneca
Ny fiainantsika dia ilay ony izay miraraka amin'ny ranomasina, izay antsoina hoe efa ho faty. Jorge Manrique
Manamavo ny fiainana hankafizanao! Jean Paul
Afaka mahatakatra ny fiainana mihemotra ny olona iray; fa mila miaina izany mandroso ianao. Søren Kierkegaard
Fa maninona ianao izao no mahita amin'ny fiainana mbola anananao eo alohanao, mandritra ny fotoana tsy voafetra? Satria tsy maintsy manana toerana ho an'ireo fanantenana tsy manam-petra izay itoeranao ianao. Arthur Schopenhauer
Tsy misy olona mahomby amin'ny fitantanana fomba fiaina hendry tsy nahy. Raha mbola velona ny iray dia tsy maintsy mianatra miaina izy. Lucius Annaeus Seneca
Raha fantatrao ny fiainana, mba omeo ahy ny adiresy. Jules Renard
Tena mahatsikaiky sy tsy an'izao tontolo izao izy izay manontany tena momba ny zavatra miseho eo amin'ny fiainana. Marcus Aurelius
Mihevitra isika fa velona, ​​fa raha ny tena izy dia miasa fotsiny tsy ho faty. Sully Prudhomme
Mila hery sy herim-po ny fiainana, mety hipetraka amin'ny seza fiandrianana ny olona, ​​hipetraka ao amin'ny trano bongo na hangataka mofo eo amin'ny vato fehizoro. Friedrich Maximilian von Klinger
Faly izahay manisy teny vaovao amin'ny angoninay momba ny fiainana sy ny fahendrena. Aza misalasala mifandray aminay!
Snuggly sy Yawny - fanampiana mandritra ny fiainana